आखिर किन कम हुन्छ महिलामा यौन चाहना ? – Bhindai Kura
अक्सर के देखिन्छ भने, यौनका लागि पुरुष नै सधै तत्पर हुनुपर्ने । अर्थात पुरुषको इच्छा अनुसार नै महिलाहरु यौनका लागि तयार हुन्छन् ।
यौनमा महिला अग्रसर हुँदैनन् । दम्पतीबीच हुने यौन सम्बन्धमा श्रीमानको इच्छा सर्वोपरी हुन्छ। श्रीमतीहरु यौन सम्बन्धका लागि इच्छा जाहेर गर्दैनन् । कतिपय अवस्थामा त उनीहरु आफ्ना पार्टनरकै खातिर मात्र यौनका लागि तयार भएको जस्तो पनि देखिन्छ । श्रीमती आफै अग्रसर हुने, आफ्नै इच्छा मुताविक यौन आसन बदल्ने, आफ्नो सन्तुष्टिलाई बढी ध्यान दिने गरेको पाइदैन ।
यौन सम्बन्धका बेला पनि पुरुष जति सक्रिय हुन्छन्, महिलाहरु त्यती हुँदैनन् । धेरैजसो महिला निस्त्रिmय जस्तै हुने गर्छन् । के उनीहरुमा यौन चाहना कम भएको हो ? के उनीहरु यौनमा उदासिन छन् ? स्वभाविक रुपमा जिज्ञासा उठ्छ ।
दम्पतीबीच नियमित यौन सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । यसले उनीहरुको भावनात्मक सम्बन्धलाई थप कसिलो र रसिलो बनाउँछ । तर, यौन सम्बन्धको प्रसंगमा महिलाहरु उति खुल्दैनन् । उति सक्रिय हुँदैनन् । उति अग्रसर हुँदैनन् । एक अध्ययनमा भनिएको छ, पुरुषको तुलनामा महिलाहरु यौन सम्बन्ध बनाउने कुराले उदास रहन्छन् ।
यौनमा उनीहरु किन उदासिन हुन्छन् ?
त्यसमा अनेक कारण हुनसक्छ । उनीहरुको शारीरिक एवं प्रजनन समस्या । मानसिकता । उमेर । परिस्थिती ।
पारिवारिक दायित्व भार
प्रजनन स्वास्थ्यको कारण
बाल्यकालको खराब याद
मलाई शहर को भिडले झन झन एक्लो गराउथ्यो,अनि म ठूलो शहरको सानो डेरामा बस्थे
लकडाउनमा सभ्य विवाह, २ सय अनलाइन जन्ती